Blog kune vanoda kubika zvinonaka
Inguva yakareba sei 4 pondo ham inotora kubika?
Zvinotora nguva yakareba sei kubika 4lb boneless ham? Isa ham mundiro yekubikira ne 1/2 kapu yemvura. Fukidza nealuminium foil. Bika pa 325 ° F kweanenge maminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu paundi kusvika kudziya. Shumira ham ikozvino kana glaze sezvinotevera: Bvisa foil kubva ham. Unobika sei 20 pondo…
Categories Zvimwe zvinobatsira
Unoita sei kuti uve nechokwadi chekuti bacon yakabikwa?
Zvine basa here kana bhekoni isina kubikwa? Bacon inobika kune yakachengeteka nekukurumidza. Kana yangojeka haina njodzi kudyiwa. Bacon mbishi pachayo ine njodzi yakaderera, chero yakarapwa nemazvo. Kunyangwe isina kubikwa, haugone kukuvadza. Ko bhekoni kubva kuchitoro yakatobikwa here? Saka…
Unogona kubika boerewors kubva muchando?
Ndeipi nzira yakanaka yekubika boerewors? Shandisa chipunu chemafuta omuorivhi mu skillet uye bvumira boerewors yako kubika pamoto muduku. Kupisa kwakaderera kunobvumira boerewors kubika zvakaenzana uchitsvaira divi rimwe nerimwe. Around 10 maminetsi padivi panofanira kukwana maminitsi makumi maviri. Ndoita sei…
Mubvunzo wako: Ndeupi muriwo wakabikwa une hutano kana mbishi?
Zviri nani kudya miriwo yakabikwa kana yakabikwa? Kudya muriwo mbishi kunopa muviri wako mwero wakakwana wefolate nemavhitamini anonyungudika mumvura akadai sevhitamini C. … Asi chikafu chiri mumuriwo wakabikwa chiri nyore kugaya nekunwa. Iyo yakapfava fiber yemiriwo yakabikwa inotungamira mukuburitswa kwevhitamini E ...
Muriwo unoshanduka sei kana wabikwa?
Muriwo unoshanduka sei kana wabikwa? Kubika kunoshandura sei muriwo? Kubika muriwo kunoputsa madziro esero ezvirimwa, zvichiburitsa zvakawanda zvekudya zvakasungwa kumadziro esero. Miriwo yakabikwa inopa mamwe ma antioxidants, anosanganisira beta-carotene, lutein uye lycopene, kupfuura zvavanoita kana iri mbishi. Muriwo wakabikwa unopawo mamwe mamineral. Muriwo unorasa chikafu chawo here...
Iwe wakabvunza: Unobika sei Swede yakachekwa mu microwave?
Swede inotora nguva yakareba sei kubika mu microwave? Isa swede yako yose muvheni yewa microwave. Isa dial kusvika kumusoro uye microwave kwemaminitsi makumi maviri. Zvinotora nguva yakareba sei kubika diced swede? Isa swede muhombe, yakavharwa saucepan. Zadza nemvura inotonhora inokwana kuti uvhare machunks. …
Inguva yakareba sei iwe unogona kubika nyama yenguruve mune inononoka cooker?
Unogona kunonoka kubika nyama yenguruve kwenguva yakareba here? Unogona kupfuudza nyama yenguruve here? Zvakaoma kudarika zvakanaka-marbled uye mafuta akachekwa pamafudzi. Zvisinei, inogona kuva mushy nekuda kweasidhi mumuchu kana kubika kunopfuurira kwenguva yakareba kupfuura nguva dzakakurudzirwa kubika. Ita shuwa kuti wakatarisa nyama yenguruve ...
Unogona here kubika ham yemhepo pa350?
Inguva yakareba sei iwe uchibika spiral ham pa350? Preheat oven kusvika 350 degrees F. Mupani diki yekugocha, isa ham flat side pasi. Fukidza zvakasununguka nefoil uye gadzira maminitsi makumi mana nemashanu. Iwe unobika kwenguva yakareba sei ham pa45? Preheisa oven kusvika 350 degrees F. Vhura ham woigeza ...
Mubvunzo wako: Kubika nekubika zvakafanana here?
Ndezvipi zvimwe zvakafanana pakati pekubika nekubika? Zvose zvinoda unyanzvi uye ruzivo. Vose vanodaidzira kucheka, kutema, kusanganisa, uye kubvongodza. Uye ivo vaviri vanogona kugadzira zvinhu zvakanaka zvekudya. Asi iwo chaiwo maitiro ekubika nekubika anowanzo siyana zvakanyanya, poindi inojekeswa zvakanyanya kana iwe ukaverenga yavo ...
Sei usingafanire kupfeka zvishongo kana uchibika?
Unogona kubika wakapfeka zvishongo? Maererano neIdaho Department of Health and Welfare “zvishongo zvinogona kuvanza utachiona hunokonzera zvirwere zvinoparirwa nezvokudya zvoita kuti zviome kugeza maoko. … Pavanenge vachigadzira chikafu, vashandi vezvekudya vanofanira kubvisa wachi, mhete, zvishongo, nezvimwe zvishongo zvese mumaoko kana mumaoko.” Sei usingafaniri…
peji1 peji2 ... peji888 Next →
Hey! Ndini Samantha. Nyika yeCulinary inoshamisa, nyika huru inobatanidza. Munyika ino, tinotora banga rine pfungwa dzakajeka mumaoko edu kuti tibikire vadiwa. Uye kunhuhwirira kwendiro dzega dzega dzimwe nguva kunogona kutitakura kuenda kunguva dzinofadza dzehupenyu hwedu. Vese vanoda uye vanoda kubika, Welcome!
KUTARISIRA VABATI VAKARUDZIRA! Zvese zvinhu zvinoiswa pane saiti zvakanyatsoitirwa ruzivo uye zvedzidzo zvinangwa! Kana iwe uchidavira kuti kutumirwa kwechinhu chero chipi zvacho kunotyora kodzero yako, iva nechokwadi chekutibata nesu kuburikidza nefomu rekubatana uye zvinhu zvako zvichabviswa!
© 2022 Nyika yezvekudya